बिना बेहुली बेहुलाको मात्र बिहे, २ सय जना जन्ती, ८ सय जनालाई बिहेभोज, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एजेन्सी। विवाहको लागि बेहुला र बेहुली दुवै हुनुपर्छ । तर, हालै एउटा यस्तो विवाह भयो जहाँ बेहुला मात्र थिए बेहुली थिइनन् । तैपनि यो विवाह धुमधामसँग भयो । बिहेमा २ सय जना जन्ती गए र ८ सय जनालाई बिहेभोज दिइयो । घटना गुजरातको हिम्मतनगरको हो ।
दैनिक भास्करको समाचारअनुसार २७ वर्षका अजय बरोटको सपना धुमधामले बिहे गर्ने थियो तर उनी मानसिक रुपमा कमजोर थिए । मनसिक अपांग भएकोले उनले बिहेको लागि बेहुली पाउन सकिरहेका थिउनन् तर कसैको बिहेमा जाँदा उनी आफूले पनि त्यस्तै गरी विवाह गर्ने इच्छा देखाउँथे । उनले यसबारेमा परिवारसँग पनि कुरा गर्थे । धेरै कोसिस गर्दा पनि बेहुली पाउन नसकेपछि उनको परिवारले बिना बेहुली अजयको इच्छा पूरा गर्ने निर्णय गरे ।
बिहेको दिन उनलाई बेहुला बनाएर सजाइयो । त्यसपछि उनलाई घोडामा बसालेर गाउँ घुमाइयो । उनको जन्तीको रुपमा २ सय जना सहभागी भए । घरनजिकै सामुदायिक भवनमा भव्य भोजको आयोजना गरियो जहाँ करिब ८ सय जना सहभागी भए । अजयका पिता विष्णुले उनका लागि बेहुली खोज्न असम्भवजस्तै भएकोले बिना बेहुली उनको इच्छा पूरा गरिएको बताए ।